BlogPad - Editor WordPress ho an'ny iPad - Geofumadas
Janoary, 2014 Apple - Mac, Internet sy Blogs, Pirinty voalohany
Farany dia nahita mpanoratra aho izay afa-po tamin'ny iPad.
Na eo aza ny maha WordPress azy ny sehatra fitorahana bilaogy manjaka, izay misy maodely sy plugins avo lenta, dia olana hatrany ny fahasarotana mahita editor tsara. Ho an'ny birao dia mbola tsy mahita zavatra aho.
Nandramako ny BlogPress, WordPress ho an'ny iOS, Blog Docs, ary tonga fotsiny mba handaminana Blogsy, na dia niafara ihany aza aho tamin'ny fandehanana tany amin'ity raharaha ity noho ny fisian'ireo tranga vao misondrotra hatramin'izay nibahana hatrany amin'ny famoahana azy amin'ny tonian'ny aterineto.
Tao anatin'ny iray amin'ireo fifanandrinana goavana dia nahitako BlogPad aho ary afaka miteny amim-pahatokisana aho fa saiky ny mpankafy WordPress rehetra dia miezaka ny hanokana ny raharahany.
Inona no mahatonga ny BlogPad Pro ho mpamoaka lahatsoratra tsara indrindra ho an'ny WordPress
Angamba ny tanjaky ny Blogsy no fahalemeny ratsy indrindra, satria amin'ny alàlan'ny fanohanana sehatra maro (Blogger, Tumblr, Joomla, TypePad, sns), dia manintona ny fiovana amin'ny fiovana marobe ny famerana fahombiazana avo lenta. Tadidiko fa nilavo lefona aho isaky ny manavao ny WordPress aho dia mila manitsy andalana ny fisie xmlrpc, ary rehefa nitantara izany aho dia nandefa hafatra ho ahy
Any izy ireo dia milaza fa mamaha izany ...
Afaka manova ny fanovana amin'ny dika manaraka amin'ny fampiharana.
Ny BlogPad dia tsy miasa afa-tsy amin'ny WordPress, na amin'ny tranokala fampiantranoana na amin'ny WordPress.com, ary amin'ny tranga xmlrpc dia tsy haiko ny fomba nanatanterahan'izy ireo izany, satria ny kilalao dia manana fahaizana faratampony hikarohany sy hamahana azy, na dia amina toerana hafa aza. Noho ny maha-WordPress azy ihany, dia nanamora ny fanatanterahan'izy ireo haingana ireo laharam-pahamehana, izay tsy tokony ho mora amin'ny Blogs ary tokony hanisy fiovana sy hikarakarana ny fomba tsy fiantraikany amin'ny sehatra hafa.
Ny iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny BlogPad dia ny fahatsapana ny fomba fanaovana ireo fampiasa. Olana teo amin'i Blogsy izany, izay amin'ny fomba adalan'izy ireo te-hampiaiky volana, dia nanana zavatra hafahafa izy ireo, toy ny tsindry tokana hanovana sary, hisintona amin'ny rantsan-tànana roa handehanana avy amin'ny tonian-dahatsary mankany amin'ny kaody ... mora be ny namaky ny atiny ho lasa hetsika ratsy rantsan-tànany. Ny fotoana dia nahatonga azy ireo hampiasa bokotra sy fidirana mora nefa naneho ny tsy fitoviana sy ny fandaniam-potoana. Tsara ny manavao, fa ny mpampiasa interface "" mpampiasa ", raha toa ka tsy mitaky fikafika na miafina izy ireo dia hankasitrahana.
Ireto misy endri-javatra sasantsasany izay tao anatin'ireto telo andro ireto, hitako fa tia ny BlogPad aho:
The checker. Io dia ahafahanao manamboatra fiteny tsipelina hafa amin'ny fiteny interface, rehefa manohina teny diso tsipelina dia mampiakatra ny fisafidianana teny mety hitranga, ary ny mpandinika dia manao fitsangatsanganana toa ny Microsoft Word, mampiseho sosokevitra hanoloana olona tsirairay, hanolo ny zava-drehetra ary hanampy amin'ny rakibolana. Izy io dia manohana ny tsipelina ho an'ny fiteny maro, ao anatin'izany ny Espaniôla, Portigey, frantsay, italianina ary kinova isan-karazany amin'ny teny anglisy. Manohana tsara ny litera koa izy io, ny fampiharana hafa dia mitazona azy ireo amin'ny kaody marika ary rehefa te-hanitsy azy ireo amin'ny WordPress an-tserasera izy ireo dia lasa tsy zakany intsony, na dia hita tsara ao amin'ny publication aza izy ireo.
Ny mpanoratra WYSIWYG. Midika io teny io hoe Izay hitanao dia azonao, tadidiko izany hatramin'ny nahatongavan'i Windows hisolo ny DOS ary nanenjika ilay hevitra hoe miasa am-pandehanana tsy misy fahagagana rehefa manonta na manonta (izay hitanao no azonao) .Fa ity BlogPad ity dia manana ny bokotra fantatry izay rehetra nampiasa Microsoft Word: bala, indentation kiheba, fomban'ny endritsoratra, mifanaraka, isa, sns.
Fa ankoatra izany dia tiako ny bokotra iray ho an'ny paikam-pirazanana izay nataontsika tamin'ny Alt + miditra, tena azo ampiharina raha te hanaraka andàlana vaovao ao anatin'io bala io ihany isika; Manana bokotra ihany koa izy mba hamoronana latabatra ilaina.
Rehefa mifidy teny iray dia miseho ao amin'ny menio ireo safidy mety azo atao: kopia, apetaho, saro-tahotra, fomba, ao anatin'izany ny famaritana ao amin'ny rakibolana nosafidianay.
Mamorona rohy hyperlink dia mamela anao hikaroka atiny ao anaty bilaogy. Tsara izany.
Amin'ny ankapobeny dia tena miasa tsara ny fampiasana; ny paste dia manadio ny format tsy mila misafidy seho manokana, fa tsy hoe tsy misy ny hafa tsy misy, fa satria izany no tadiavin'ny mpitoraka blaogy.
Mpandrindra sary. Azo ampidirina avy amin'ny takelaka izy io, maka mivantana, url, Dropbox na Google Drive. Fa ny zavatra tsara indrindra dia ny fahafahana misafidy ny habeny, afaka mamela azy io amin'ny vahaolana avo lenta miaraka amin'ny hyperlink na ny fampiharana dia mamadika azy io amin'ny habe voafantina. Ny fanohanana fampifanarahana dia tena tsara, zavatra tsy mahomby amin'ny fampiharana hafa. Tsy ho ratsy izany raha toa ka misy fampandehanana Clipping izay tsy ananan'izany ilay fampiharana.
Izy io koa dia mamela anao hisafidy izay sary hoso-doko. Tsaroako fa te hiala ny mpanoratra mivantana amin'ny Microsoft Word aho ary nahatonga ity disadisa ity hanala izany.
Amin'ny ankapobeny ny fampiharana dia tena tsara. Ankoatry ny fifehezana ny fidirana, avy amin'ny menio sisiny dia azonao atao ny miditra amin'ny pejy, sary, sokajy, tag, na sivana araka ireo masontsivana ireo aza. Azonao atao ny mijery fanehoan-kevitra, manova, manova ny toetoetra na mamaly; Fitaovana izay amin'ny fampiharana dia manome antsika fahazarana izay tsy afaka atao raha tsy amin'ny fidirana WordPress ... na dia manana fidirana amin'ny dashboard ihany koa izy.
Ho an'ireo bilaogy atolotra ao amin'ny WordPress.com dia mamokatra ny antontan'isan'ny Jetpack Plugin. Mariho fa tsy tohanana amin'ny bilaogy nampiantrano ity ary mety hiteraka olana amin'ny fifandraisana lavitra amin'ny xmlrpc.php.
Ary amin'ny maha-tonian-dahatsoratry ny asa ivelan'ny daholobe dia dinihina tsara izy io. Mahaliana ny fomba isafidianany misaraka amin'ny fanovana atiny sy ny fanovana fanovana, noho izany tsy mila manokatra ny fidirana ianao hifehezana ny lafiny toy ny sokajy, tag, sary asongadina, ny toeran'ny famoahana, ny slug, ny fitrandrahana sns. Ao amin'io bokotra io ihany eo an-jorony no misy ny fidirana mahazatra indrindra: mamoaka, manavao na avy amin'izay efa navoaka, mamafao ary topy maso.
Ankoatra izany, ny fanamafisana dia malalaka amin'ny fanajana ny:
Isan'ny votoaty ivelan'ny aterineto,
Ny faharetan'ny fiara voavonjy,
Habaka fitenin'ny multimedia
Ny haben'ny sary,
Ho famaranana, fampiharana tsara. Ho nandoa mihoatra ny $ 4.99 vidiny aho raha fantatro ny zava-drehetra atao. Saika ampy ho an'ny bilaogera hiditra amin'ny orinasa: manoratra.
Mandehana any amin'ny pejy an'ny BlogPad Pro
Raiso izany avy amin'ny Apple Store
Previous Post«Previous Ny MappingGIS Courses: ny tsara indrindra dia misy.
Next Post Izay tokony hatao raha mangalatra ny iPadmanaraka »